कसरी सान्तेन्डिनमा सप्ताहांत खर्च गर्न | सडकको लागि एक युगल
के तपाईं ज्वालामुखी र सुन्दर सैंटोरिनको सप्ताहांत बिताउन आफ्नो तरिकामा हुनुहुन्छ? यहाँ तपाईंले भेट्न र गतिविधिहरू हेर्नका लागि केहि राम्रा ठाउँहरू भेट्नुहुनेछ। एक हफ्ते अन्तमा सबै केहि निचोल्न सम्भव नहुन सक्छ, तपाई सधैँ छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँलाई सबैभन्दा आकर्षित गर्दछ।
कुनै कुरा होइन जहाँ तपाईं Santorini मा रहन, त्यहाँ असीमित मात्रामा हेर्न र गर्नका लागि चीजहरू छन्, साथसाथै अविश्वसनीय विस्ताहरू जुन ग्रहमा सबैभन्दा सुन्दर मध्ये केही छन्!
लवली समुद्र तट स्यानोटोनी भ्रमण गर्नुहोस्
सम्भवतः एकदम स्पष्ट छ, हामी एक सुन्दर द्वीपमा छौं जुन समुद्र पछि घेरिएको छ। Santorini धेरै धेरै समुद्र तटों को महान विविधता संग हो कि कुनै पनि आश्चर्य हुनेछ। आउनुहोस्5सबैभन्दा राम्रो समुद्र तटहरू जुन तपाईं सैंटोरेनिमा जान सक्नुहुन्छ!
1। रातो बीच
निश्चित रूपमा Santorini को सबैभन्दा सुन्दर र अद्वितीय समुद्र तट मध्ये एक! एक थोडा खपत र पुग्न सजिलो छैन, यो सानो चुनौती प्रस्तुत गर्दछ, तर यो अझै पनि उच्च सिजनको समयमा र एक राम्रो कारणको लागि सुन्दर भीड भयो।
यो क्रिस्टल स्पष्ट पानी स्नोर्कलिंगको लागी एकदम सही छ, रातो ज्वालामुखी कछुए र चट्टानले तपाईंको लागि अद्भुत दृष्य र अनौठो वातावरण रचना गर्नेछ।
2। विलीचा समुद्र तट
यो समय तपाईका वरिपरि सुन्दर रङमा प्रस्तुत गरिनेछ। विलीचा समुद्र तट वा व्हाइट बीच एक शांत र शान्त समुद्र तट हो जो ऊँची सलाखों वा पानी को खेल को पानी को बिना पानी को खेल को बिना।
यस समुद्र तटको प्रमुख स्यानोटोनीमा अर्को अद्वितीय समुद्र तट अनुभवको लागि!
3। पेरिस बीच
थप रंगहरू? हो, निस्सन्देह! Perrisa बीच एक लामो र आकर्षक काले रंग को समुद्र तट को एक भाग हो Perivolos Beach र टापुमा सबैभन्दा व्यस्त मध्ये एक हो।
हाम्रो अघिल्लो समुद्र तटमा पूर्ण विपरीत, यहाँ तपाईंले पानी खेलकुद गतिविधिबाट सबै चीजहरू फेला पार्नुहुनेछ, डीजे र अधिक!
4। कामारी बीच
कामारी समुद्र तट एक अन्य समुद्र तट कालो लावा कंक्रीजहरु संग बनाइन्छ र हवाई अड्डा र कमारी को एक सुंदर शहर को नजिकै स्थित छ।
सजिलै सुलभ, राम्रो वातावरण र अद्भुत दृश्य संग राम्रो तरिकाले व्यवस्थित। अरू के तपाईले सोध्नुभयो?
5। कोलम्बोस बीच
केहि शान्त र पृथक खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि एक गोप्य कोलम्बोस समुद्र तटको साथ एक खरगोश मारा।
यो द्वीपमा मात्र एक मात्र समुद्र तट हो जसले न्युयोस्टवादी मित्रतापूर्ण छ र तपाईले यहाँ धेरै मान्छे भेट्न सक्नुहुन्न। कोलम्बोस बीच छिपे भएका र शान्त भरी ठाउँहरू मनपर्नेहरूको लागि एकदम उत्तम भत्ता छ!
सूर्यास्त क्रूज संग सेल
तपाईं कहिल्यै थाहा छैन, तर यो केवल Santorini को यात्रा को सबै भन्दा राम्रो क्षण मध्ये एक हुन सक्छ!
ईजियन सागर र टापुलाई फरक दृष्टिकोणबाट अनुभव गर्नुहोस् र एक अविस्मरणीय सूर्यास्तलाई साक्षी दिनुहुन्छ, यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ? जब त्यहाँ धेरै छनौट गर्न छनौट हुन्छ, यहाँ सूर्यसेटहरूको लागि उत्तम क्रूर र भ्रमणहरू छन्।
ज्वालामुखी टापु क्रूज
कटानरन क्रूजसँग खाना र पेय
Catamaran छोटा समूह क्रूज
के तपाईंको भित्री इंडियाना जोन्स जागिरहेछ? वा सायद तपाईं सबै दिन समुद्र तटमा राख्नु र साहसी र बढी उत्साह खोज्नु भएको छैन Santorini मा गर्न को लागी? यहाँ कुनै चिन्ता छैन, जस्तै सैंटोरेनीले आफ्नै विकल्पका केही विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दछ!
Skaros रक - 300 कदम बढाएं र त्यो दिल को धब्बा उठो, तेजस्वी विचारहरु को साक्षी र मध्यकालीन किला को खंडहर को भ्रमण
एफआईएए ओआईए ट्रेल सम्म - द्वीपमा सबैभन्दा लोकप्रिय ट्रेलहरू मध्ये एक। फिराको सुन्दर बंदरगाहमा सुरू गर्दै यसले ऐतिहासिक स्थलहरु र सुन्दर शहरहरु को ओभरमा अद्भुत अन्त्य संग दृश्यहरुलाई अनावरण गर्दछ जुन गहिरो नीलो समुद्र को अनदेखी गर्दछ।
Nea Kameni ज्वालामुखी - अर्को पक्षमा फिरामा सुरू हुने छ कि तपाईंले पर्वत माथि उठाउनुहुनेछ। सक्रिय ज्वालामुखी को किनारों को अन्वेषण गर्नुहोस, गर्मी को महसुस गर्नुहोस र विचारहरु लाई गले र गर्म स्प्रिंग्स मा तैरें!
वाइन स्वादको लागि जानुहोस्
वाइन प्रेमी वा होइन, शराब स्वास्नीले तपाईंको सुन्दर सप्ताहांतमा सैंटोरोनीमा अर्को अनौठो अनुभव हुन सक्छ।
वाइन Santorini को सबै भन्दा महत्वपूर्ण उत्पादनहरु मध्ये एक हो। एक वाइनरीमा गएर भ्रमण गर्नाले तपाईं आकर्षक दाखिला वरिपरि हिड्न र दाखरस उत्पादनको इतिहास सिक्ने मौका पाउनेछ। र यो स्वादको, स्वाद!
पिउलिङ नाइटलाइफ अनुभव गर्नुहोस्
सैंटोरेनी दिनहुँ सुन्दर र सुन्दर छ, तर सूर्य सेट गर्दा पूर्णतया फरक विभेद हुनेछ।
Santorini एक बाहिर को लागि एक सही द्वीप हो जो बाहिर जाने र मजा संग प्यार छ Fira एक रातको लागि उत्कृष्ट स्थानहरू मध्ये एक हुन।
प्रसिद्ध डीजे को अतिथि उपस्थिति, पब र समुद्र तट क्लब फैंसी लाउंज र नृत्य फर्श सम्म। Santorini को जंगली नाइटलाइफ जसलाई तपाईंले मनपर्ने तरिकामा लिनुहोस्। चरण तपाइँको हो!
श्रेणी: युरोप, ग्रीस, यात्रा योजना टैग: युरोप, greece, santorini
← बार्सिलोनामा एक सप्ताहांत कसरी खर्च गर्ने?
कसरी वियना मा एक धेरै सप्ताहांत खर्च गर्न को लागी →
2 टिप्पणिहरु "कसरी सान्टोरोनिमा लामो सप्ताहांत खर्च गर्न"
मलाई Santorini प्यार छ। मलाई रंग सेन्टोरिन को पूरा घरहरु लाई प्यार गर्दछ। यो धेरै सुन्दर छ र तपाईंले यो धेरै महिमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
5 सक्छ, 2019
हामी पनि Mitesh! स्पष्ट रूपमा संसारको सबैभन्दा चौंकाने ठाउँहरू मध्ये एक।